जन्मदिनमा आविष्कार केन्द्रलाई ५० हजार - DURBAR TIMES
HomeNewsजन्मदिनमा आविष्कार केन्द्रलाई ५० हजार
बाग्लुङ | गलकोट नगरपालिका–७ मल्म घर भई हाल जापानमा रहेका तुलवीर थापा ‘समर्पण’ले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई ५० हजार आठ सय ९० रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
शुक्रबार आविष्कार केन्द्रमै पुगी पत्रकार बबिता शर्मा र बैङ्कर्स शिव आचार्यले उक्त रकम केन्द्रका संयोजक पुनलाई हस्तान्तरण गरे । संयोजक पुनले प्रवासदेखि थापाले गरेको सहयोग र देखाएको सद्भावप्रति आविष्कार केन्द्र आभारी रहेको बताए ।
थापाले तत्काललाई रु. ५० हजार सहयोग गरेपनि आउँदो एक वर्षसम्म हरेक महिना आफ्नो कमाइको रु. पाँच हजार केन्द्रका लागि छुट्टाउने प्रतिबद्धता जनाए । त्योसमेत गरी थापाको सहयोग रकम रु. एक लाख दश हजार पुग्ने छ । “जन्मदिनमा केही नयाँ काम गरौँ भन्ने थियो, आविष्कार केन्द्रकाबारेमा सुनेपछि त्यसमै सहयोग गर्ने सोच पलायो”, उनले भने । नौ वर्षअघि जापान पुग्नुभएका थापाको नागोयामा रेष्टुराँ व्यवसाय छ । व्यवसायसँगै सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा पनि उनी सक्रिय छन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका संस्थापक तथा अध्यक्ष वैज्ञानिक डा. महाबिपुनले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रलाई नेपालको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएकाछन् । फ्युचर एजुकेशन अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी (फेस्ट) ले बुधबार आयोजना गरेकोकार्यक्रममा बोल्ने क्रममा पुनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन…
काठमान्डौ| युवा सजगता अभियानले महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय अविष्कारकेन्द्रलाई सहयोग गरेको छ । सामाजिक विकासबाटै राष्ट्रको उन्नति सम्भव छ भन्नेमासजग रहेको अभियानको शनिबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले अविष्कार केन्द्रलाईसहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । ’युवा सजगता अभियानको पालो रु ३० सहयोगमा हात…
Previous articleमङ्सिर २ गतेबाट खुला ठाउँमा खाना नखुवाइने
Next articleआज धनतेरसः धनतेरसमा के किन्ने ? कस्ता सामान किन्दा हुन्छ धनलाभ, पूजाविधिसहित